Roma oo Filim kooban oo horor ah u shiday Barcelona , Xili Roma ay uso Baxday 4 Dhamaadka UCL | Puntland
Apr 11, 2018 - Aragtiyood
Kooxda AS Roma ayaa aduunka iyo Barcelona kaga yaabsatay soo laabasho ay taariikhda UEFA Champions League xusi doonto kadib markii ay si aan la rumaysan karin dhinaca kale ugu dhigtay guuldaradii 4-1 ka ahayd ee Camp Nou ku soo gaadhay, waxayna Roma sanado badan kadib u soo baxday afar dhamaadka UEFA Champions league iyada oo Barcelona ka dhigtay kuwo ceeboobay oo bahdilaad wayn la kulmay.
Kooxda AS Roma ayaa garookeeda ku soo dhawaysay Barcelona oo ay kulankii lugtii hore ee Camp Nou guuldaro 4-1 ah kala soo laabtay waxayna doonaysay in ay markeeda garoonkeeda dhinaca kale ugu dhigto natiijadii hore waxayna qaybtii hore Roma soo bandigtay qaab ciyaareed ay dhibaato badan ugu abuurtay Barcelona.
DAQIIQADII 6 AAD Roma ayaa dhul gariir ka abuurtay Olympico Stadium kadib markii ay goolkeeda furitaanka kaga naxsatay Barcelona waxaana goolkan u saxiixay Edin Dzeko kaas oo markale Barcelona shabaqa ka soo taabtay wuxuuna goolkani ahaa kan ay Roma ku samaysay niyada ka caawisay in ay meel fog si layaableh uga soo laabto.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayay Roma soo bandhigtay bandhig laayableh iyada oo Barcelona ka dhigtay kuwo taag-taagan oo aan wax tarkii looga bartay lahayn waxayna Roma si wayn u doonaysay in ay qaybtii hore shaqo badan qabto.
Laakiin qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay Roma hogaanka ciyaarta ku haysay waxaana looga baahnaa laba gool oo kale si ay ugu soo baxaan afar dhamaadka Champions League isla markaana ay u raadiyaan qaabkii ay Barcelona kaga tuuri lahaayeen tartanka ayna xili ciyaareedkan guuldaro ku soo arag.
Qaybtii labaad ee ciyaarta markii layskugu soo laabtay waxaa lays waydiinayay haddii ay Roma la ciyaarayso kooxaha yar yar ee horyaalka Talyaaniga iyo haddii ay Barcelona la ciyaarayso waxayan Roma noqotay kooxda daqiiqad kasta goolal laga filan karayay.
Roma ayaa xili horeba goolal badan dhalin kartay haddii aanu Ter Stegen samayn lahayn badbaadin badan laakiin taas Barcelona ayaan waxba ku qaadan waxayna wali sii ahayd koox uu baal ku qoyay oo tamar gabtay halka Roma ay u dagaalamaysay si aan hore loo arag.
Tababare Eusebio Di Francesco ayaa si buuxda tatiko ahaan ugu garaacay Ernesto Valverde oo fashilkiisii ugu xumaa ee waayihiisa Barcelona la kulmay waxaya Roma sugaysay waqtiga ay dhalin doonto goolasha looga baahan yahay balse Barca oo aan weerarkeedii meel uu maray la arag ayaa difaacasho ahaana si wayn ugu liidatay.
DAQIIQADII 58 aad Roma ayaa lagu abaal mariyay rekoodhe kadib markii uu Dzeko qalad kala kulmay Pique iyada oo garsoorihu uu la tashaday caawiyihiisa goolka u dhawaa taas oo keentay in Roma loo dhigay fursadii ay ciyaarta ku barbarayn lahayd wadarta labada kulan.
DAQIIQADII 58 AAD De Rossi ayaa kooxdiisa u dhaliyay goolka labaad ee muhiimada khaaska ah u lahaa isaga oo darbaada rekoodhahan ku garaacay Ter Stegen waxayna ciyaartu noqotay 2-0 ay Roma hogaanka ciyaarta ku dheeraysatay iyada oo Barcelona dhibaato hor leh dhexda u sii gashay.
DAQIIQADII 82 AAD Roma ayaa heshay goolka ay taariikhda UEFA Champions League abid xusi doonto kaas oo uu u dhaliyay Manolas wuxuuna ahaa goolkii sida rasmiga ah Barcelona daaqada uga tuuray isla markaana Roma u soo saaray afar dhamaadka UEFA Champions league isaga oo ciyaarta ka dhigay 3-0 ay Roma dhinaca kale ugu dhigtay natiijada labada kulan.
Barcelona oo u muuqatay mid kaliya magac ahaan garoonka ugu jirtay ayaa isku darayday in ay dhamaadkii ciyaarta la timaado gool laakiin taas waxaa uga dhaaratay koox dhiiro galin aan hore loo arag ku shaqaysay isla markaaana tobanaan sano kadib markii ugu hroaysay u soo baxday wareega afarta kooxood ee UCL.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3-0 ay Roma ku dubatay kooxdii isku arkaysay in ay u soo baxayso afar dhamaadka UEFA Champions league ee Barcelona iyada oo wadarta labada kulan ay ku dhamaatay barbaro 4-4 ah balse goolkii Dezko ee kulankii Camp Nou ayaa Roma u soo saaray wareega xiga.